Fandraisana an-tanana ny geosocial sy ny toerana misy anao | Martech Zone
Zoma 11 Novambra 2011 Zoma 11 Novambra 2011 Douglas Karr
Ny statistika somary mahatalanjona momba ny fananganana Geosocial and location-based Services (LBS) amin'ny alàlan'ny fitaovana finday dia naseho tamin'ity inforgraphic ity avy amin'ny Flowtown - Fampiharana momba ny haino aman-jery sosialy. ny 58% n'ireo mpampiasa finday avo lenta dia mampiasa ireo serivisy ireo. Ny infographic dia mamaritra ny serivisy tsirairay avy:
Tambajotra Geosocial - ity karazana tambajotra sosialy ity dia mampiasa serivisy sy fahaiza-manao ara-jeografika, toy ny geocoding sy geotagging, hahafahan'ny dinamika sosialy fanampiny.
Serivisy miorina amin'ny toerana - ity karazana fampahalalam-baovao na serivisy fialamboly ity dia mampiasa ny toerana misy ny toeran'ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny tamba-jotra.
Tags: geosociallbsserivisy mifototra amin'ny toeranatoerana-moninaFivarotana finday sy tablettefindayfinday avo lenta